Madaxweyne Hirshabelle oo Odiyaasha dhaqanka Hiiraan kala hadlay fulinta dalabka dowladda Federalka - Bandhiga Media
Madaxweyne Hirshabelle oo Odiyaasha dhaqanka Hiiraan kala hadlay fulinta dalabka dowladda Federalka
Magaalada Baladwyene ee gobalka Hiiraan waxaa ka socda kulamo ay leeyihiin Madaxweynaha Hirshabelle, odiyaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka.
Madaxweynaha iyo Odiyaasha ayaa isku mari la’ iney ku heshiiyaan in ciidamada dowladda laga daabulo magaalada Baladweyne oo la geeyo magaalada Dhuusomareeb.
Dowladda Federalka ayaa Todobaadkii hore soo saartay amarkan balse Ugaas Khaliif ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in ciidan loo baahanyahay la daabulo isagoo xusay in qalabkooda uusan u dhameystirneen oo qaarkood ay caruur yihiin.
300 oo kamid ah ciidamada Booliska Hirshabelle ee magaalada Baladweyne ayey dowladda dooneysaa in lagu xoojiyo ciidamada horay loo geeyay Dhuusomareeb.
Wafdi ka socda dowladda Jarmalka oo kulamo la qaatay madaxweynaha Koofur Galbeed
Afrika: Malaayiin qof oo sanad walba la xanuunsada qaadashada cunto aan bad-qabin